Dowladda Afghanistan oo ku eedeysay Pakistan in ay hoos ka caawiso ururka Taliban – Calanka.com
Dowladda Afghanistan oo ku eedeysay Pakistan in ay hoos ka caawiso ururka Taliban
Dagaalka u dhaxeeya ururka Taalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistaan ayaa sii xoogeystay wixi ka dambeeyey marki uu Mareykanka iclaamiyey inuu ciidamadiisa Afghanistan kala baxayo.
Balse sida degdegga ah ee ay Taalibaaniyiintu dhawrkii toddobaad ee la soo dhaafay ay ku qabsadeen dhul badan oo dowladda Afghanistan gacanta ugu jiray waxaa ka dhalatay suaashaasi ah suuragal ma tahay xoogag shisheeye oo Talibaan dhanka ciidanka ka caawiyo si ay guulo u gaaraan?
Dowladda Afghanistan waxay marar badan sheegtay Pakistan iney taageerto ururka Taalibaan iyada oo uga gol leh dano siyaasedeed oo ay ka leedahay.
Ololaha baraha bulshada
Shacabku waxay sheegayaan ururka Taalibaan haddii uu Pakistan caawimaad ka heli lahayn iney u suuragasheen iney sidan degdegga ah uga guuleystaan ciidamada dowladda Afghanistaan.
Maalmihi la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ka billawday olole ka dhan ah Pakistan oo loogu magac daray #SanctionPakistan. Sida oo kale Facebook waxaa si weyn u dhex socday seddex mowduuc oo amuurtan looga hadlayey.
Madaxweyne ku xigeenka Afghanistan Amrullaah Saalix oo barta Tweetarka ee #SanctionPakistan farriin soo dhigay wuxuu qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba uu ugu baaqay iney gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro ururka Taalibaan.
Saalix ayaa caan ku ah aragtida uu had iyo jeer iska taago dalka Pakistan isaga oo marar hore eedo kulul oo toos ah Pakistan ugu soo jeediyey.
Sida oo kale Raxmatullaaj Andar oo ah sargaal sare oo ka tirsan golaha amniga dalka Afghanistaan ayaa eed taa la mid ah dusha kala dhacay dalka Pakistan.
Andar qoraal uu ku qoray afka Pashto oo uu soo dhigay bartiisa Tweertarka wuxuu ku sheegay Pakistan iney xuddun u tahay qalalaasaha taagan oo dhan.
Andar waxaa kale uu qoray, “Osama bin-Laden halkee laga helay? Pakitsan ayaa laga helay. Halkey wax weliba ka dhacayan? waa Pakistan. Mareykanka halkuu ka baadigoobayey bin-Laden? waa Pakistan. Halkuuna joogay? Pakistan ayuu joogay.”
Dalabka ku aaddan in Pakistan la cunaqabateeyo
Mas’uuliyiin sare iyo wasiirro ka tirsan Afghanistan dhankooda waxay billaabeen ololaha dhanka baraha bulshada iney farriimo ka dhan ah Pakistan isku dhaafsadaan.
Xabiib Khan, oo ah wariye Afghanistan ku sugan oo ah aasaasaha warbaahinta Orband News wuxuu qoray, “Waa in cod dheer looga hadlo dagaalka wakaalashada ee Pakistan ay ka waddo Afghanistaan. Farriintaasi kaddibna dhanka Tweeter-ka waxaa la isku dhaafsaday malaayiin farriimood oo halku dhig looga dhigay Afghanistan Zindabad.”
Dad badan oo isticmaala baraha bulshada ama qayb ka ah ololaha baraha bulshada waxay dalbanayaan inPakistan cunaqabateyn caalami ah la saaro iyaga oo baraha bulshada ku wadaagayey sawirrada carruur dagaalka Afghanistan ku dhimatay.
Qurbajoogta reer Afghanistan waxay codkooda ku biiriyeen dalabka ka imanaya muwaaddiniinta reer Afghanistan ee gudaha dalkaasi ku nool.
Xamiidullaah Mohib oo ah la taliyaha amniga qaranka Afghanistan wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka Pakistan had iyo jeer weerar afka ah u geysto.
Xamiidullaah oo bishii hore marti ku ahaa barnaamijka Hard-Talk ee BBC mar la weydiiyey dagaalka uu ururka Taalibaan wado iney Pakistan joojin karto.
Wuxuu ku jawaabay, “Dabcan, Talibaaniyiintu wuxuu saldhigyo ku leeyihiin gudaha Pakistan. Hoggaankoodana waxay ku sugan yihiin Pakistan. Pakistan-na weligeed arrintan ma inkirin. Halkaas ayaa lagu daweeyaa. Waxay helaan hub iyo rasaas. Waxaan aaminsanahay in dagaalka. ” Marka Taliban ayaa dagaallameysa, laakiin kani waa dagaal wakiil, oo go’aankiisa ku jiro gacanta Pakistan.
Xiriirka Afghanistan iyo Pakistan
Xiriirka labada dal u dhaxeeya ayaa sii xumaanayey wixi ka dambeeyey dagaalki mujaahidiinta ay la galeen dowladdi uu midowgi Soofiyeet taageerayey sanaddi 1980-yadii.
Mareykankana xilligaasi mujaahidiinta ayuu caawiyey si midowgii soofiyeeti looga saaro siyasadda iyo faragelinta uu ku hayo dalka Afghanistan.
Ciidamadi midowgo Soofiyeti marki ay Afghanistaan ka baxeen, ugu dambeyn dowladdi Najibullah 1989-kii ayey hubka dhigtay waxaana talada dalka Afghanistan la wareegay mujaahidiinta midowga soofiyeeti dagaalka kula jiray.
Laga soo billaabo 1990-kina ururka Taalibaan taageero xooggan wuxuu ka heli jiray dalka Pakistan.